Uhlobo lwe-BBEdit 14.0: Isibuyekezo esikhulu kunazo zonke kuma-macOS walolu hlelo | Ngivela kwa-mac
Uhlobo lwe-BBEdit 14.0: Isibuyekezo esikhulu kunazo zonke kuma-macOS walolu hlelo
UManuel Alonso | | Mac App Store
I-BBEdit iyi- I-Professional HTML kanye nomhleli wombhalo we-macOS. Lo mkhiqizo owine umklomelo wenzelwe ukuhlangabezana nezidingo zababhali bewebhu, ababhali, nabathuthukisi be-software. Inikezela ngenani elikhulu lemisebenzi yokuhlela, ukusesha nokuyisebenzisa, ngokwesibonelo ikhodi yomthombo, nedatha yombhalo. I-Version 14.0 yethule ushintsho oluningi, kufaka phakathi ukusiza abasebenzisi ukuhlela amanothi abhaliwe ngokushesha. Kungaba isibuyekezo esikhulu kunazo zonke ohlelweni kusukela ngaleso sikhathi buyela ku-Mac App Store.
Abahleli bazojabula ngale nguqulo entsha ye-BBEdit ye-macOS
I-Bare Bones Software's BBEdit isihleli sombhalo esicace bha futhi kufaka phakathi izici ezizuzisa kakhulu kohlelo. Ukuvuselelwa kunguqulo engu-14.0, onjiniyela bafake uhlu olude lwemisebenzi kanye nama-tweaks ethuluzi. Kulabo abangadingi kahle emkhakheni wokufaka amakhodi, ngokungangabazeki ushintsho olukhulu kunawo wonke amanothi, okungukuthi, amafayela adalwe ngokushesha ngokuthatha amanothi kunamaphepha agcwele. Isici sizogcina ngokuzenzakalela umbhalo ofakiwe njengenothi, namazwibela akhiqizwe ngokuzenzakalela, ukuvimbela abasebenzisi ekubeni namafayela amaningi angenasihloko kwifolda.
Siyazi ukuthi amakhasimende ethu amaningi enza inqwaba yamaphepha angenasihloko ukuze athathe amanothi ngokushesha futhi ancike ekuzinzileni okuyisimanga nokuvuselelwa okunamandla kokuphahlazeka kweBBEdit ukuvikela umsebenzi wabo. Singeze isici esisha "samanothi" ku-BBEdit 14, esihlinzeka ngezindlela ezahlukahlukene zokwenza amanothi ezigcinwa ngokuzenzekelayo Futhi, mhlawumbe okubaluleke kakhulu, zibizwa ngokuzenzakalela ukuze ungagcini ngokuzibuza ukuthi imiphi imibhalo yakho engama-305 “engenasihloko yombhalo” oyifunayo.
Esikhundleni salokho uma okwakho kuzothuthukiswa, kufanele wazi ukuthi kukhona ukuthuthuka emibhalweni eqondene nolimi. Umsebenzi wosesho wencazelo ethuthukisiwe, usizo lokucaciswa kwamapharamitha womsebenzi, izici ezingeziwe zokuzula ikhodi, ukugqamisa iwindi ezinkingeni ze-syntax nezama-semantics, nokuhlelwa kabusha kwemibhalo eqondene nolimi.
Izinguquko zingumphumela wokusekelwa okwakhelwe ngaphakathi kwe- umthetho olandelwayo wesiphakeli solimi, lapho "amaseva" olimi afakwe ngumsebenzisi ayalela ukusebenza kokuzwela kolimi. Lokhu kuvumela ithuluzi ukuthi lishintshe ukusebenza kwalo ngokuya ngolimi olusetshenziswayo. Izilimi ezintsha ezisekelwayo zifaka phakathi i-Go, R, Rust, Lisp-family text files ezifana neClojure nePstrong Universal Scene Description (USD).
Eminye yemisebenzi okungenziwa yilezi:
Sebenza ngendlela ofuna ngayo amafayela wokulawula, amafolda, amadiski kanye namaseva
Jabulela i- ukuba namandla kombhalo
Ihlangabezana namazinga we hlanganisa ngaphandle komthungo ekusebenzeni komsebenzi okukhona
Isibonisi esibonakalayo ukuhlinzeka ukufinyelela okulula kakhulu ekilasini
Sesha bese ushintsha amafayela amaningi
Amathuluzi wokuchaza iphrojekthi
I-syntax yamaningi amakhodi womthombo izilimi zokugoqa ikhodi
Ukuhambisana ne- Isikripthi se-MacOS Unix
Ukuqedwa kombhalo nekhodi
Amathuluzi we Umaki we-HTML.
I-BBEdit inikeza a Isikhathi sokuhlola sezinsuku ezingama-30. Ngaleso sikhathi, yonke imisebenzi iyatholakala. Ngemuva kwesikhathi sokuhlola, zonke izici ezikhethekile zinganikwa amandla kabusha ngokuthenga ilayisense noma ukubhalisa ku-Mac App Store. Uma ubusebenzisa i-BBEdit ngemodi yamahhala, kufanele simane silande futhi sifake inguqulo entsha. Lokhu kuzosinika isikhathi esisha sokuhlola sezinsuku ezingama-30 ukuze uzame zonke izici ezintsha.
Uma unelayisense ekhokhelwayo ye-BBEdit 13.5.7 noma enye inguqulo yangaphambilini yezohwebo ye-BBEdit, ukuthuthukiswa kungathengwa. Manje kufanele sikuqaphele lokho Amakhasimende e-Mac App Store kufanele azi into eyodwa:
Uma unokubhaliselwe kwe-BBEdit okusebenzayo, ngokushesha uzokwazi ukufinyelela kuzo zonke izici ezithuthukile ze-BBEdit 14. Lokhu akuguquli isikhathi sokubhalisile.
Uhlelo lolu luhambisana ngokwendabuko ne-Apple Mac M1. Ngakho-ke ngeke kube nankinga ngamatheminali amasha enkampani. Manje, maqondana nezidingo zohlelo, khumbula ukuthi kuyadingeka kunguqulo ye-BI-BEdit 14 esebenzisa ama-macOS 10.14.2 noma kamuva, noma ngabe kunconyelwa u-10.14.6 noma kamuva.
Ungalanda uhlelo kusuka ekhasini elisemthethweni kusuka konjiniyela noma ku-Mac App Store. Nawe unayo ukufinyelela ibhukwana yohlelo ukuze imisebenzi emisha icace kuwe noma uma ufuna ukuqala kulo mhlaba. Uhlelo oluhle lutholakala kuwo wonke umuntu onalo isibuyekezo esisha ngokuphelele lokho kuzojabulisa labo abaswele.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » Mac App Store » Uhlobo lwe-BBEdit 14.0: Isibuyekezo esikhulu kunazo zonke kuma-macOS walolu hlelo
Isibuyekezo esibalulekile sokuphepha se-MacOS Mojave neCatalina